orient - Synonyms of orient | Antonyms of orient | Definition of orient | Example of orient | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for orient
Top 30 analogous words or synonyms for orient
ဗော့စတော့ ၁ ဗော့စတော့ ၁ (, "East 1" or "Orient 1") သည် ဗော့စတော့စီမံကိန်း၏ပထမဆုံးအာကာသပျံသန်းမှုဖြစ်ပြီး လူ့သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် ပထမဆုံးလူလိုက်ပါသည့် အာကာသယာဉ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၁၊ ဧပြီ ၁၂ တွင် လွှတ်တင်ခဲ့သည်။ ပျံသန်းမှုတွင် ဆိုဗီယက်အာကာသယာဉ်မှူး ယူရီဂါဂါရင် အာကာသသို့ လိုက်ပါသွားသည်။ ပျံသန်းမှုသည် အာကာသသို့လူသား ပထမဆုံးရောက်ရှိမှုဖြစ်ပြီး လူလိုက်ပါသောယာဉ်ဖြင့် ပထမဆုံးကမ္ဘာပတ်ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ ဗော့စတော့ ၁ကို ဆိုဗီယက်အာကာသစီမံကိန်းကလွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကီရင်ကီရင်မော့ဗ်နှင့်အခြားသူများ၏ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် ဆာဂေးကိုရိုလက်ဗ်ဦးဆောင်သည့် ဆိုဗီယက်သိပ္ပံပညာရှင်များက ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပင်လယ်ပျော်ဘီလူး The shipyard exercised its right to sell the vessel andadeal was brokered with Hong Kong Orient Overseas Container Line founder C. Y. Tung to lengthen the ship by several metres and add 156,000 metric tons of cargo capacity through jumboisation. Two years later she was relaunched as "Seawise Giant".
ကားလို့စ် စလင်းမ် ၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် ဂျူလီယန်သည် ကုန်ခြောက်များရောင်းချသော လမ်းပြကြယ် [ La Estrella del Oriente (The Star of the Orient) ] အမည်ရှိ စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး၊ မက္ကဆီကို မြို့လယ်ခေါင်တွင် အိမ် ခြံ မြေ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် အတွက် ပေးချေနိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၆ ခု ဩဂုတ်လ တွင် ဂျူလီယန် စလင်းမ် နှင့် လင်ဒါ ဟဲလူးတို့ သည် မက္ကဆီကို စီးတီး တွင်လက်ထပ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့၏သားသမီး ခြောက်ယောက်အနက် ကားလို့စ် သည်အငယ်ဆုံးသား ဖြစ်သည်။ ကားလို့စ်၏ ဖခင် ဂျူလီယန်သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။